डाउनलोड गर्नुहोस् Wallpaper 1920x1080 को लागी Windows
सित्तैमा डाउनलोड गर्नुहोस् को लागी Windows (10.25 MB)
डाउनलोड गर्नुहोस् Wallpaper 1920x1080,
वालपेपर 1920x1080 (वालपेपर) को रूपमा परिभाषित दृश्य फाइलहरू हुन्। वालपेपरहरू डेस्कटप इन्टरफेससँग काम गर्ने अपरेटिङ सिस्टम र अपरेटिङ सिस्टमहरू अनुकूलन गर्न प्रयोगकर्ताहरूको लागि सिर्जना गरिएको सरल र व्यावहारिक समाधानहरू मध्ये एक हो। कम्प्युटरबाट ट्याब्लेटसम्म इन्टरफेसहरूसँग काम गर्ने कम्प्युटर तार्किक उपकरणहरू बीच वालपेपर प्रयोग गरेर तपाईंले आफ्नो यन्त्रलाई आफूले चाहेअनुसार अनुकूलित र निजीकृत गर्न सक्नुहुन्छ।
वालपेपर 1920x1080 डाउनलोड
त्यहाँ लाखौं आकर्षक वालपेपरहरू छन्, क्लासिक पृष्ठभूमिबाट फोटोहरू जुन विभिन्न ढाँचाहरूसँग एकीकृत हुन्छन्। तपाइँ यी मध्ये कुनै पनि अद्भुत वालपेपर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको यन्त्रको पृष्ठभूमिको रूपमा फोटो सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
वालपेपर 1920x1080 के हो?
वालपेपर के हो? हामीले माथिको प्रश्नलाई संक्षिप्त रूपमा व्याख्या गर्यौं, अब वालपेपर 1920x1080 के हो? प्रश्नको जवाफ दिऔं। पीसी, टेलिभिजन र टेलिफोन जस्ता स्क्रिन भएका सबै इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूमा स्क्रिन रिजोल्युसन हुन्छ। हामी छोटकरीमा स्क्रिन रिजोल्युसनलाई स्क्रिन साइज पनि भन्न सक्छौं। यहाँ, 1920x1080 को मतलब स्क्रिन 1920x1080 पिक्सेल हो। उदाहरणका लागि, 1920x1080 रिजोल्युसनमा, 1920 ले तेर्सो प्रतिनिधित्व गर्दछ जबकि 1080 ठाडो प्रतिनिधित्व गर्दछ।
वालपेपर पूर्ण HD
वालपेपरको दायरा भित्रका सबै वालपेपरहरू पूर्ण HD, रंगीन र उच्च गुणस्तरका छन्। अवश्य पनि, वालपेपर पूर्ण HD को मतलब के हो? प्रश्नको जवाफ दिँदा, वालपेपर सुविधाहरू उल्लेख गर्न आवश्यक छ। वालपेपर फुल एचडी एप्लिकेसन, जुन हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा बारम्बार सामना गर्छौं, विशेष गरी डिजिटल सन्दर्भमा, धेरै मानिसहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ। वालपेपर, जुन सामान्यतया मानिसहरूले इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू प्रयोग गर्छन्, प्रयोगकर्ताहरूलाई हजारौं फोटोहरू पनि प्रदर्शन गर्दछ।
यसबाहेक, उत्कृष्ट गुणस्तर र सबैभन्दा उत्तम तस्बिरहरू 1920x1080 वालपेपरको दायरा भित्र प्रस्तुत गरिन्छ। वालपेपर 1920x1080 को साथ, तपाईले चाहेको कुनै पनि फोटो तुरुन्तै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि तपाईंसँग एउटा अचम्मको फोटो छ जसले तपाईंलाई खुसी बनाउँछ, तपाईंले यसलाई आफ्नो फोनको पृष्ठभूमिमा राख्न सक्नुहुन्छ। यस तरीकाले, तपाइँ निरन्तर गुणस्तर र भव्य फोटो हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
वालपेपर इन्जिन के हो?
वालपेपर इन्जिन एप्लिकेसन, जसले भर्खरै आफ्नो लागि नाम कमाउँदै आएको छ, लाखौं प्रयोगकर्ताहरूले रुचाउँछन्। फोन, कम्प्यूटर र ट्याब्लेटका लागि विशेष वालपेपरहरू भएको अनुप्रयोगमा विभिन्न प्रकारका वालपेपरहरू पनि छन्। तपाईंले Softmedal बाट वालपेपर इन्जिन नि:शुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
विशेष तस्बिरहरू, विशेष गरी सबैको स्वाद र शान्तिको लागि डिजाइन गरिएको, वालपेपर इन्जिनको दायरा भित्र पनि प्रस्ताव गरिन्छ। वालपेपर इन्जिनको दायरा भित्रका सबै फोटोहरू उच्च HD ढाँचामा छन् र धेरै उच्च गुणस्तरका छन्। एकै समयमा, यसले डाउनलोड गरिएको उपकरणलाई कुनै पनि हिसाबले हानि गर्दैन। यसको विपरित, यसले उपकरणको अगाडि ठूलो देखिन्छ।
वालपेपर 4K के हो?
तपाईलाई थाहा छ, उच्चतम ढाँचा मध्ये एक वालपेपर 4K हो। वालपेपर 4K HD ढाँचा भन्दा धेरै उच्च छ र उत्कृष्ट गुणस्तरको छ। तसर्थ, तपाईंले डाउनलोड गर्ने फोनको स्क्रिन अझ रंगीन र राम्रो गुणस्तर देखाउनेछ। यद्यपि, 4K गुणस्तरको वालपेपर फोटो सकेसम्म चाँडो डाउनलोड गरिनेछ। थप रूपमा, डाउनलोड गरिएको फोटो तुरुन्तै खुल्नेछ र तपाइँ यसलाई तपाइँको उपकरणमा वालपेपरको रूपमा बनाउन सक्षम हुनुहुनेछ।
तपाईले चाहानु भएको फोटो वालपेपर 4K को दायरा भित्र लागू गर्न सक्नुहुन्छ, या त तपाईको एन्ड्रोइड फोनमा वा कम्प्युटरमा। वालपेपर, जुन एक प्रभावकारी वालपेपर अनुप्रयोगको रूपमा आउँछ, के मतलब छ? के वालपेपर PC मा प्रयोग गरिन्छ? यहाँ विवरणहरू छन्!
वालपेपर PC 4K
वालपेपर पीसी अनुप्रयोग कम्प्युटरको डेस्कटप पृष्ठभूमिका लागि विशेष रूपमा तयार गरिएको फोटो अनुप्रयोग हो। एपमा भएका सबै वालपेपरहरू, जहाँ A देखि Z सम्मका हजारौं वालपेपरहरू छन्, विशेष रूपमा PC प्रयोगकर्ताहरूका लागि डिजाइन गरिएका छन्।
वालपेपर फुल HD को दायरा भित्रका सबै वालपेपरहरू धेरै उच्च गुणस्तर र पूर्ण HD ढाँचामा छन्। त्यसकारण, जब तपाइँ यसलाई तपाइँको कम्प्युटरको पृष्ठभूमिमा राख्नुहुन्छ एक शानदार डिजाइन तपाइँसँग हुनेछ। तपाइँ वालपेपर फुल एचडी को दायरा भित्र वालपेपरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँको डेस्कटप कम्प्युटरमा मात्र होइन, तर तपाइँको ल्यापटप वा ट्याब्लेट यन्त्रहरूमा पनि।
फाईल आकार: 10.25 MB